Xisaabiyaha Qaabka Caalamiga ah
Kaydso qaybta "Microtomography"
Isniin, 16 Maarso 2020 by Cristina Maria Sunea
Nidaamka Compact Micro CT
Nidaamkan sare ee waxqabadka leh ee CT wuxuu aruuriyaa xogta joomatari gudaha iyo dibedda adag.
Sawirka CT-ga wuxuu ku arkaa dhalada oo buuxda saxsanaanta xad dhaafka ah. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso kormeer tayo leh oo otomaatig ah, iwm.
Jimcaha, 16 Oktoobar 2020 by Sara
Waxqabadka sareeya ee Nidaamka Micro & Nano CT
Nidaamkan waxqabadka sare ee micro & nano CT wuxuu ururiyaa xogta joomatari gudaha iyo dibedda adag.
Waxqabadka ugu sarreeya ee Micro & Nano CT System
Nidaamkan waxqabadka sare ee micro & nano CT wuxuu ururiyaa xogta joomatari gudaha iyo dibedda ah.
Soosaarka QC microtomography
weli waa horumar - sanadka soo socda